192.168.8.1 - Ukungena komlawuli
Ikheli le-IP 192.168.8.1 ikheli le-IP eliyimfihlo ngaphakathi Kwenethiwekhi Yendawo Yasendaweni, nguwe kuphela ongasebenzisa leli kheli lasesizindeni se-inthanethi futhi alikwazi ukusetshenziswa ku-inthanethi. Ungasebenzisa leli kheli le-IP 192.168.8.1 ngokuvula iphaneli yomlawuli we-router nokwenza izinguquko ezimbalwa kuzilungiselelo zayo ezizenzakalelayo. Izinguquko ezimbalwa ezinjalo zifaka phakathi ukushintsha iphasiwedi & igama lomsebenzisi, ukusethwa kwenethiwekhi, ukwengeza i-firewall, nokusetha idivayisi.
Kunezidingo ezithile okufanele sizilandele ukuze singene kuleli kheli le-IP futhi senze izinguquko ezidingekayo. Okubaluleke kakhulu ukuba sendaweni yenethiwekhi yomzila noma ungene nje. Umkhawulo omkhulu ngokuphathelene naleli kheli lasesizindeni se-inthanethi ukuthi alitholakali ku-WWW ngakho-ke liyasiphoqa ukuthi sibe sendaweni yenethiwekhi yomzila ukuze sisondele kusixhumi esibonakalayo sewebhu. Isiphequluli sethu sewebhu kufanele sibe nzima (i-Google Chrome, i-Mozilla Firefox, njll.) njengoba le ndlela idinga ukwesekwa kwe-pop-up HTML5.
Kufanele ulungise futhi umzila wakho ukuze uyisebenzise ngokunethezeka. Kunezilungiselelo eziningi ongazimisa kuphaneli yokuphatha yerutha. Ungafunda kabanzi kusixhumi esibonakalayo sewebhu.
ikhasi1 ikhasi2 ... ikhasi8 Olandelayo →
ngineminyaka emingaki manje